လင်းယံခ: October 2013
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 4:10 PM
ဒီ Pacific Rim ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားကတော့ ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ အတွင်းပိုင်းတစ်နေရာကနေ ပေါ်ထွက်လာတဲ့ သတ္တဝါတွေနဲ့ လူသားတွေ ကမ္ဘာပေါ်မှာ စစ်ဖြစ်ကြပုံကို ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတဲ့ ဇာတ်ကားပါ။
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 12:03 PM
Jobs ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားလေးဟာ Apple ကုမ္ပဏီကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ Steve Jobsရဲ့ ဘဝဇာတ်ကြောင်းကို ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကားပါ။
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 4:57 PM
တစ်ချို့တွေက Mozilla ကို သုံးကြသလို တစ်ချို့ကျတော့လည်း chrome ကို သုံးတတ်ကြပါတယ်။ အခု Safari browser ကတော့ Apple ရဲ့ ထုတ်ကုန်တစ်ခုပါ။ ဒါကြောင့် Safari ကို သုံးကြသူများ browser မှာ မြန်မာလိုပေါ်ချင်ရင် အောက်က အတိုင်း လုပ်လိုက်ရင် ရပါတယ်။ အခုမှ Safari ကို သုံးချင်သူများ အတွက်လည်း download လုပ်ဖို့ ပါ တစ်ခါတည်း တင်ပေးထားပါတယ်။
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 12:30 PM
ဒီသီချင်းလေးဟာလည်း ကျွန်တော်တို့ 27th SEA Games Song ထဲမှာ တစ်ပုဒ်အပါအဝင်တစ်ခုပါဘဲ။ ပြည်ပရောက်နေတဲ့ မြန်မာတွေအတွက်ရော ပြည်တွင်းက မြန်မာ ပရိသတ်တွေ နားဆင်ရအောင်လို့ သီချင်းရော စာသားပါ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ....
ဒီသီချင်းလေးကိုတော့ လူတိုင်းသိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ အခုလည်း TV အစီအစဉ်မှာ ခဏခဏ ထုတ်လွှင့်လျက်လည်း ရှိပါတယ်။ နောက်ပြီး SEA GAME မှာ Myanmar Football Fan မှ ဂုဏ်ပြုသီဆိုမယ့် သီချင်းလေးပါ။ ဒါကြောင့် အလွယ်တကူ နားဆင်နိုင်အောင်လို့ သီချင်းလေးသာမက စာသားလေးလည်း လိုက်ဆိုနိုင်ဖို့ ရေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ....
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 1:58 PM
ကိုယ့်ချစ်သူက သင့်ရဲ့ဖူးစာရှင် ဟုတ်မဟုတ် သိချင်ကြဘူးလား၊ နည်းကတော့ လွယ်လွယ်လေးပါ။ သင်ရယ်၊ သင့်ရဲ့ချစ်သူမွေးနေ့သက္ကရာဇ် အားလုံးပေါင်းကြည့်၊ နောက်ဆုံး ရလာတဲ့ကိန်းတစ်လုံးကအဖြေပေါ့။ ကဲအစမ်းလေးလုပ်ကြည့်ရအောင်။
Google Play က apk တွေကို ကွန်ပျူတာနဲ့ အလွယ်တကူ download ချနည်း
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 1:09 PM
အခုတင်မယ့် ပိုစ့်လေးကတော့ Google Play က free apk တွေကို ကွန်ပျူတာနဲ့ download လုပ်ဖို့ အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းလေးတစ်ခုပါ။ မြန်မာမိုဘိုင်းက ကိုသက်နိုင်စိုး ရေးထားတာကို ကျွန်တော်ထပ်လောင်း ဖြည့်စွက် တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 8:33 PM
အခုတင်ပေးလိုက်တာကတော့ ကိုသိုးဆောင်းရဲ့ ၀တ္ထုစာအုပ်တွေပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ ပထမစာအုပ်ကတည်းက ကြိုက်ခဲ့တာ ထွက်သမျှအကုန် ဖတ်ဖြစ်တယ်ဗျ။ အခုလည်း ကိုလုလင်မောင် (၀ဲလောင်) တင်ထားတာတွေ့လို့ ပြန်ရှယ်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ကို သိုးဆောင်းရဲ့ ဝတ္ထုတွေကို ဖတ်ချင်ရင်တော့ အောက်က နာမည်လေးပေါ်ကို နှိပ်ပြီး ဒေါင်းလိုက်ပါဗျာ...
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 8:16 PM
မကြာခင် သီတင်းကျွတ်ရောက်တော့မည် ဆိုသည်ကို ညတိုင်း မီးရှူးမီးပန်း ဖောက်သံ များက အသိပေးနေသလို ရှိနေသည်။ သီတင်းကျွတ်သည် မြန်မာပြက္ခဒိန်အရ ခုနှစ်လမြောက် ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာသုံးပြက္ခဒိန်အရ စက်တင်ဘာလ - အောက်တိုဘာလတွင် ကျရောက်သည်။ ထင်ရှား သော ပွဲတော်တစ်ခုမှာ မီးထွန်းပွဲတော်ပင် ဖြစ်သည်။ သီတင်းကျွတ်လ၏ အထိမ်းအမှတ်ပန်းမှာ ကြာမျိုးငါးပါး ဖြစ်သည်။
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 6:00 AM
ဘယ်လောက်ပဲ ဆင်းရဲတဲ့မိသားစုပဲဖြစ်ဖြစ် အဲဒီမိသားစုမှာ ကြင်နာတတ်၊ ချွေတာတတ်၊ အကောင်းမြင်ပြီး သပ်ရပ်သန့်ရှင်းအောင်နေတတ်တဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦးရှိတယ်ဆိုရင် အဲဒီမိသားစုဟာ စိတ်ဓာတ်ရဲ့ပျော်စံရာ၊ ခွန်အားတွေရတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။
သင့်မှာ မိခင်ကိုချစ်ခင်စွဲလမ်းတဲ့စိတ် ဘယ်လောက်ရှိသလဲ
သင့်မှာ မိခင်ကိုချစ်ခင်စွဲလမ်းတဲ့စိတ် ဘယ်လောက်ရှိသလဲ။ စမ်းသပ်ကြည့်ရအောင်.. Yes, No ထဲက အဖြေတစ်ခုကိုရွေးပေးပါ။
၁) ငယ်စဉ်ကတည်းက စကားနားထောင်ပြီး လိမ္မာတဲ့ကလေးလို့ မကြာခဏ သင်ချီးကျူးခံရဖူးတယ်။ (Yes) (No)
ည ၇နာရီခွဲမှာ Jesus collegeမှာကျင်းပတဲ့ ကျောင်းသား ဆရာမိတ်ဆုံစားပွဲကို ကျွန်မတို့တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ တကယ့်ခမ်းနားကြီးကျယ်တဲ့ အခါသမယပါ။ လူတိုင်း ဝတ်ရုံရှည်ဝတ်ရပါတယ်။
Cambridgeတက္ကသိုလ်ရဲ့တည်ထောင်ခြင်းက အရောင်အသွေးစုံလှတယ်။ ဒီတည်ထောင်ခြင်းက အမိန့်နာမခံသူတစ်စုရဲ့ ခိုလှုံရာကနေ စခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်။
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 5:05 PM
ဒီတစ်ခေါက် တင်ပေးလိုက်တဲ့ ဆော့ဝဲလ်ကတော့ ဟိုအရင်တစ်ခေါက် တစ်ပေးလိုက်တဲ့ Proshow Gold ထက် ပိုကောင်းပါတယ်။ ဒီဆော့ဝဲလ်လေးကတော့ အရင်ထက်ကို ပိုပြီးတော့ ဖန်တီးလို့ရပါတယ်။ ဓါတ်ပုံတွေကို effect အမျိုးမျိုးထည့်နိုင်သလို ၊ စာသားကိုလည်း ကြိုက်သလို ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ ဒီဆော့ဝဲလ်လေးက HD version အထိကို ပြုလုပ်နိုင်တော့ ရုက်ထွက်အနေနဲ့ ပိုပြီး ကြည်လင်ပြတ်သားတာကို တွေ့ရပါတယ်ဗျ။
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 4:59 PM
ကလေးတစ်ယောက်က "ဒါ သားရဲ့ကစားစရာအရုပ်"လို့ပြောရင် ဒါဟာ ပိုင်ဆိုင်မှုဥပဒေပဲ။
ကလေးတစ်ယောက်က "ဝယ်ပေးမယ်လို့ မေမေပြောထားပြီးသာလေ"လို့ပြောရင် ဒါဟာ သဘောတူစာချုပ်ပဲ။
ကလေးတစ်ယောက်က "သားကို သူအရင်ရိုက်တာ"လို့ပြောရင် ဒါဟာ ရာဇဝတ်ပြစ်မှုပဲ။
ကလေးတစ်ယောက်က "ဖေဖေက ရတယ်လို့ ပြောပြီးသား"လို့ပြောရင် ဒါဟာ ပြဌာန်းဥပဒေပဲ။ ------
ဥပဒေပါမောက္ခ Harold J. Berman
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 4:56 PM
အမေရိကန်ကယ်ရီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်နယ်မြေခွဲ Berkeleyကျောင်းဝင်းမှာ ပါမောက္ခအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ ပါမောက္ခ Saul Perlmutter ဟာ ၂ဝ၁၁ခုနှစ်မှာ တခြားပညာရှင်နှစ်ဦးနဲ့အတူ ရူပဗေဒနိုဘယ်လ်ဆုကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ နိုဘယ်လ်ဆုရကြောင်းသတင်း သူကြားသိချိန်ဟာ သူစာမေးပွဲခန်းစောင့်နေချိန်ဖြစ်တယ်။ သူဆုရတဲ့သတင်းကို ကြားတာနဲ့ "ကျွန်တော့်အတွက် ကိုယ်ပိုင် ကားပတ်ကင်ရပြီပေါ့"လို့ပဲ အားလုံးကို သူတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပြောခဲ့ကြောင်းကို ကျောင်းတွင်းဝက်ဆိုက်ဒ်ကနေတဆင့် သိခဲ့ရပါတယ်။
တခြားလူတွေနဲ့ မနှိုင်းယှဉ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျော်လွန်နိုင်ဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်။
ငိုမယ်ဆို အားရပါးရ ငိုလိုက်... ခံစားရသမျှ ပေါက်ကွဲထွက်စေ။
ရယ်မယ်ဆို လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရယ်လိုက် .... ကြီးပြင်းရင့်ကျက်တဲ့လက္ခဏာ အထင်းသားပေါ်စေ။
မျက်ရည်နဲ့ ဒီကနေ့ကိုမုန်းနေမယ့်အစား ချွေးစက်နဲ့ ဒီကနေ့ကို ရုန်းကန်လိုက်ပါ။
မျက်ရည်တွေကုန်ခမ်းသွားတဲ့အခါ ကျန်ရှိနေခဲ့သင့်တာက "ကြံ့ခိုင်သန်မာခြင်း" ပဲဖြစ်တယ်။
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 4:29 PM
Written by - သူရိန်လှိုင်ဝင်း
ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်က ထပ်ကာတလဲလဲ ကြားဖူးခဲ့တဲ့ ပုံပြင်လေး တစ်ပုဒ်ရှိတယ်။ ဆင်းရဲတဲ့ လူနှစ်ယောက်ကို အသပြာတစ်ထောင်ထုပ် တစ်ထုပ်နဲ့ ပညာဘယ်အရာကို ယူမလဲလို့ မေးတဲ့အခါ တစ်ယောက်က အသပြာတစ်ထောင် ထုပ်ကိုယူပြီး တစ်ယောက်ကတော့ ပညာကို ယူခဲ့တယ်။ အချိန်အနည်းငယ် အကြာမှာတော့ အသပြာတစ်ထောင်ထုပ် ယူခဲ့တဲ့သူက ငွေတွေ ကုန်သွားတဲ့အခါ အရင်လို ဘ၀မျိုးကိုပဲ ပြန်ရောက်သွားခဲ့ပြီး ပညာကို ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ လူကတော့ သူသင်ကြား လိုက်ရတဲ့ ပညာကို အရင်းတည်ပြီး လုပ်ကိုင်တာ တစ်သက်လုံး ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ နေထိုင်သွားရတယ်ဆိုတဲ့ ပုံပြင်လေးပေါ့။ ပုံပြင်ရဲ့ ပေးချင်တဲ့ သင်ခန်းစာကတော့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပါ။ ငွေကြေး အရင်းအနှီး ဆိုတာ ကြာရှည်မခံဘူး ကုန်ခန်းသွားနိုင်တယ်။ ပညာအရင်းအနှီးကသာ တစ်သက်တာပတ်လုံး မကုန်မခန်းနိုင် သုံးစွဲနိုင်တယ်။ ပညာရွှေအိုး လူမခိုးနိုင်ဘူး ဆိုတဲ့ သဘောပါပဲ။
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 4:27 PM
"ဒီမိုကရေစီအရည်အချင်းဆိုတာ ကျောင်းဘောလုံးပြိုင်ပွဲကနေ လေ့ကျင့်ပေးလိုက်တာ"တဲ့။ ဒီလိုလေ့ကျင့်ပေးလိုက်တဲ့ ဒီမိုကရေစီအရည်အချင်းရဲ့ နံပါတ်တစ်အချက်က အရှုံးကိုဝန်ခံတဲ့အရည်အချင်းဖြစ်တယ်။ --- ရှုံးရဲတယ်၊ လှလှပပရှုံးဝံ့တယ်။
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 4:22 PM
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 4:18 PM
အင်္ဂလန်စာရေးဆရာ Richard Happer က ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးက ထူးဆန်းအံ့သြဖွယ်ဥပဒေ ၂၅ဝချက်အကြောင်းကို "The law is an ass"ဆိုပြီး စာအုပ်ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့တယ်။ ဥပဒေတချို့ကို အကြမ်းဖျင်း ဘာသာပြန်မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 4:17 PM
နာမည်ကြီးတော်တော်များများကို ကျွန်တော်တွေ့ဖူးပါတယ်။ သူတို့က သိပ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ ဥပမာ Rain Manရုပ်ရှင်ရဲ့ဇာတ်ညွန်းရေးဆရာ Barry Morrow။ ဒီရုပ်ရှင်ကားနဲ့ပဲ အော်စကာဆု အကောင်းဆုံးဇာတ်ညွှန်းဆုကို သူရခဲ့တယ်။ သူတရုတ်ပြည်ရောက်တော့ ပီကင်းမြို့က ဟိုတယ်တစ်ခုမှာ သူ့အတွက် ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ပေးထားတယ်။ သူ အားအားမနေနိုင်ဘူး။ သူ ဗီဒီယိုထွက်ရိုက်တယ်။ လမ်းတစ်နေရာမှာ Rolls-Royce ကားတစ်စီးတွေ့တော့ သူရိုက်တယ်။
ပုံသေတော့ သတ်မှတ်လို့ မရပါဘူး။ နောက်လည်း သူ့ထက် ပါးတဲ့ Laptop တွေ ကြိမ်းသေပေါ်လာအုံးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် လောလော ဆယ် လက်ရှိ ကာလမှာတော့ အပါးဆုံး Laptop က Samsung မှ ထုတ်တဲ့ Seires9ဖြစ်ပါတယ်။ အထူက ၀.၆ လက်မပဲ ရှိပါတယ်။ လက်မဝက် ကျော် ရုံလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 4:01 PM
* Hyper-Threading (processor resources ကို ကောင်းကောင်း အသုံးပြုနိုင်)
* 32 nm Silicon (စွမ်းအင် အသုံးချမှုနည်းပြီး အပူချိန်လျော့)
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 4:00 PM
ဂျပန် Willcom ကုမ္မဏီမှ ထုတ်တဲ့ ကမ္ဘာ့အသေးဆုံး စမတ်ဖုန်း ဖြစ်ပါတယ်။ အရွယ်အစားအားဖြင့် ၂ လက်မသာ ရှိပြီး ဖန်သားမျက်နှာပြင်က ၁လက်မပဲ ရှိပါတယ်။
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 3:56 PM
လူတစ်ယောက်မှာ သေဆုံးခြင်း နှစ်ကြိမ်ရှိတယ်
ပထမအကြိမ်သေဆုံးခြင်းက သူရဲ့နောက်ဆုံးထွက်သက် ထွက်သွားတဲ့အချိန်
ဒုတိယအကြိမ်သေဆုံးခြင်းက ဒီလောကမှာ သူ့နာမည်ကို ဘယ်သူမှ ထပ်မခေါ်၊ မပြောတော့တဲ့အချိန်
လောကမှာ ပထမအကြိမ်သေပြီး ဒုတိယအကြိမ်မသေတဲ့လူတွေ အများကြီးရှိတယ်.
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 3:54 PM
အမေရိကန်နိုင်ငံက တီထွင်ဖန်တီးတာကို အလေးထားတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံက ပညာရေးကို အလေးထားတယ်။
ရုရှားနိုင်ငံက လက်နက်ကို အလေးထားတယ်။
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 3:52 PM
အတင်းအဖျင်း ဘယ်လောက်နည်း၊ များပါစေ
အမှားအမှန် ဘယ်လောက်နည်း၊ များပါစေ
ဒါတွေဟာ ဘဝမှာတွေ့ကြုံရတဲ့ အစိတ်အပိုင်းလေးတစ်ချို့ပါပဲ
တစ်ချိန်လုံး အလေးထား ဂရုစိုက်နေစရာမလိုပါဘူး
ဘဝက လတ်ဆတ်ဖို့လိုတယ်.. ချောမွတ်ဖို့လိုတယ်
ချစ်သူအပေါ် ဂရုစိုက်မှုပိုပါစေ.. စစ်ဆေးမေးမြန်းမှု နည်းပါစေ
သူငယ်ချင်းအပေါ် ခွင့်လွှတ်မှုပိုပါစေ... ဇာချဲ့မှု နည်းပါစေ
ဇနီးအပေါ် ယုယမှုပိုပါစေ... အေးစက်လျစ်လျူရှုမှု နည်းပါစေ
တစ်ခါတစ်လေ ပျော်ရွှင်နေတဲ့ အပျော်တွေဟာ
တစ်ချို့တစ်ချို့က အပေါ်ယံ အပြုံးတွေနဲ့။
တစ်ချို့တစ်ချို့တွေက ရင်ထဲက အမုန်းတွေနဲ့။
မလုပ်ဖူးတဲ့အလုပ်ကို လုပ်ခြင်းအားဖြင့် သင့်ကို ကြီးပြင်းစေတယ်
(အတွေ့အကြုံကို ကြီးပြင်းစေတယ်၊ စိတ်နေစိတ်ထားကို ကြီးပြင်းစေတယ်)
မလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကို လုပ်ခြင်းအားဖြင့် သင့်ကို ပြောင်းလဲစေတယ်
မလုပ်ရဲတဲ့အလုပ်ကို လုပ်ခြင်းအားဖြင့် သင့်ကို ထိုးဖောက်ကျော်လွှားစေတယ်
(မလုပ်ရဲတော့ မလုပ်ဘဲနေတယ်.. လုပ်ရင်တစ်ခုခုဖြစ်မှာကြောက်တယ်
တကယ်တမ်း လက်တွေ့လုပ်ကြည့်တော့ အိုး..လွယ်လွယ်လေးရယ်)
ပိုစ့်တင်သူက >> Linn Yan Kha at 2:37 PM
ချစ်ပန်းဝင်ကောက် ခဲ့တယ် မေ...
အောက်တိုဘာ ၁ ရက်နေ့ ဦးသိန်းစိန်၏ မိန့်ခွန်းအပြည့်အစုံ
ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာ နိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အောက်တိုဘာ လ ၁ ရက်နေ့ တွင် ပြည်သူ သို့ ပြောကြား သည့် မိန့်ခွန်း အပြည့်အစုံ
မိဘ ပြည်သူများ ခင်ဗျား
ကျွန်တော် တို့  နိုင်ငံရဲ့ လက်ရှိ အခြေအနေ များ ကို မိဘ ပြည်သူများ ထံ ရေဒီယို မှ တစ်ဆင့် အသိပေး ပြောကြား နေ ကျ ဖြစ်တဲ့ အတိုင်း ယခု လည်း စက်တင်ဘာ လ အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့ ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှု များ ကို ပြောကြား ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။